Inqwelomoya esuka eRhawutini isiya eKapa ngenqwelo moya yoMzantsi Afrika ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Inqwelomoya esuka eRhawutini isiya eKapa ngenqwelo moya yoMzantsi Afrika ngoku
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ukubuya kweSAA kuya kubonelela ngokulingana ngakumbi kwintengiso ngokwexabiso lamaxabiso etikiti. Oko othwala wangena wangena emva kokuhlangulwa kweshishini kuye kwabanomthamo wendawo omncinci kwaye oko kuthetha ukuba amatikiti aye abiza kakhulu. Ukubuyela eSAA esibhakabhakeni kuya kuthetha amaxabiso akhuphisanayo kwaye kuya kwenza ukuba abemi boMzantsi Afrika bande.
Emva kweenyanga zamalungiselelo, i-South African Airways iqala kwakhona ngaphakathi nasekhaya kwinkonzo ye-Afrika.
Inqwelo moya yokuqala ecwangcisiweyo yoMzantsi Afrika isuka eRhawutini yaya eKapa ngomhla wamashumi amabini anesithathu kwinyanga yoMsintsi.
Iinqwelomoya zenzelwe ukuqala kwiidolophu ezintlanu zaseAfrika- iAccra, iKinshasa, iHarare, iLusaka neMaputo.
Ukulandela iinyanga zokulungiselela emva kokuphuma kuhlangulo lweshishini, i-South African Airways (SAA) iqala kwakhona inkonzo yasekhaya neyasekhaya yeAfrika. Umphathi wokuqala
uhambo olucwangcisiweyo kukusa ekuseni ukusuka eOR Tambo International eRhawutini ukuya Kapa Okwamanye amazwe ngoSeptemba 23 kwaye yenye yeendlela ezintathu zokubuya ngenqwelomoya ngosuku phakathi kwezi zixeko zibini. Iinqwelomoya zenzelwe ukuqala kwiidolophu ezintlanu zaseAfrika- iAccra, iKinshasa, iHarare, iLusaka neMaputo.
Ingqonyela yeThutyana yeSAA uThomas Kgokolo uthi, “Le veki iyazingca kwaye ibalulekile kwiSAA kunye nabasebenzi bayo ngokunjalo nabemi bonke baseMzantsi Afrika. Uhambo lwethu lokubuyela esibhakabhakeni khange lube lula kwaye ndibothulela umnqwazi abasebenzi bethu abazinikeleyo kuzo zonke iindawo zeshishini abanazo nababeka iiyure ezinde phambi kwalo mhla. Abantu kuzo zonke iinkalo zeshishini bafuna enye into ngaphandle kokuba iSAA iphumelele kwaye sakhe inqwelo moya entsha esekelwe kukhuseleko kunye nomzekelo wenkonzo yabathengi. ”
UKgokolo utsho ngelixesha YeeHambo zoMoya yaseMzantsi Afrika ineminqweno emikhulu, kwaye i-ethos engaphezulu iya kuba lolunye loxanduva lokulawula imali kunye nokuzinikela elubala. “Eli shishini siliqala ngokutsha sinombono omtsha wokuzingca ngophawu olwenziweyo kwaye olo lubethelelwe kuwo wonke umsebenzi. I-odolo yethu yokuqala yeshishini kukusebenzela yethu
iindlela zokuqalisa ngokufanelekileyo nangendlela enenzuzo kwaye emva koko ujonge ukwandisa uthungelwano kunye nokukhulisa iinqanawa zethu, konke kuxhomekeke kwimfuno kunye neemeko zentengiso. ”
Usihlalo weBhodi yeSAA uJohn Lamola uthi, “ukubuya kweSAA kuza kubonelela ngokulingana kwimakethi ngokwexabiso lamaxabiso etikiti. Oko othwala wangena wangena emva kokuhlangulwa kweshishini kuye kwabanomthamo wendawo omncinci kwaye oko kuthetha ukuba amatikiti aye abiza kakhulu. Ukubuyela kwethu esibhakabhakeni kuyakuthetha ukhuphiswano lwamaxabiso kwaye kuya kwenza ukuba abemi boMzantsi Afrika babe nokubhabha. ”
Utsho uLamola SAAUkubuyela esibhakabhakeni kukwangumboneleli omkhulu woqoqosho, ngakumbi kugxilwe ngokuqinileyo kwiinqwelo-moya zokuhamba. “Ngaphandle kwezoqoqosho, kukwakho neqhayiya. Ukubona imibala yemisila yeSAA kwii-tarmacs zamanye amazwe ayisiyonto entle nje kuphela eMzantsi Afrika kodwa kwilizwekazi liphela. ”
SAAAbaphathi bethutyana: URhwebo uSimon Newton Smith uthi, “Zininzi iindlela, isikweko kwilizwe. khange ihlale inembali elula, kodwa iyomelela, abantu bayo banekratshi ngokufanelekileyo kwaye lilizwe elingaze lijongelwe phantsi. Umsebenzi wethu kukubonisa umhlaba ukuba uMzantsi Afrika uyenyuka kwaye uqala uhambo oluya ekubuyiseleni ngokupheleleyo nangcono. Siqala ngokuzithoba kodwa ngamabhongo amakhulu. ”
Umqhubi wenqwelo moya omkhulu kwaSAA uMpho Mamashela uthi “Sonke thina sizakuba phambili kwinqwelomoya kwiiveki neenyanga ezizayo siwuqonda ngokupheleleyo umbono omtsha weSAA kwaye siyazingca ngokuba yinxalenye yeli xesha litsha. Sizimisele ukugqibelela ngokupheleleyo nokwenza abantu baseMzantsi Afrika bazingce. ”
The Rights and Obligations of a Child in Camp Novemba 30, 2021